अविवाहित लताको कुल सम्पत्ति ५० मिलियन अमेरिकी डलर, अब यो सम्पतिको मालिक को होला ? – Nep Stok
माघ २५, २०७८ मंगलबार 270
उमेरमा निधन भयो । संक्रमित भएपछि मुम्बईको ब्रीच केन्डी अस्पतालमा भर्ना भएकी उनले अस्पतालमै अन्तिम श्वास फेरिन् । उनको निधनपछि भारतभर शोकको लहर छाएको छ ।
Prevयस्ता थिए दु’र्घटनामा परेका बेहुला बहुली,पूरा गाउँ भिडियोमा यस्तो देखियो (भिडियो सहित)
Nextपाँचकट्ठा जग्गा आमाको नाममा भएपछि छोराले आफ्नै आमालाई जङ्गल लगी ह’ त्या ? (भिडियो हेर्नुस)